အလုပ်၊ရာထူး | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
အလုပ်၊ရာထူး	မေးခွန်းအားလုံးကို မြင်တွေ့စေရန် ညာဖက်အစွန်ရှိ (Calculate ဘေးမှ တြိဂံ)ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။ မေးခွန်းများ Drop Down ကျလာမည်။
ဒီနှစ်ထဲမှာ ရာထူးတက်ကိန်း ရှိသလား။
အခုဝင်မဲ့အလုပ်မှာ အထက်လူကြီးနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလား။
အခုဝင်မဲ့အလုပ်က ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလား။
ဒီနှစ်ထဲမှာ အလုပ်နေရာ အပြောင်းအရွှေ့ရှိသလား။ အလုပ်ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရင် အောင်မြင်မလား။ လက်ရှိရာထူးတည်မြဲပါ့မလား။
ဝန်ထမ်းအလုပ်ကို တာရှည်လုပ်ရဖို့ကံပါသလား။ ခဏဘဲလုပ်ရမလား။
ဌါနတွင်း စာမေးပွဲဖြေထားတာ အောင်မြင်မလား။ တာဝန်ပေါ့လျော့မှုကြောင့် အပြစ်ပေးခံရမလား။ ကိုယ်အမှားတစ်ခုလုပ်ထားတယ်။ အဲဒါ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နိုင်သလား။ အခုဖြစ်နေတဲ့ ထုချေလွှာတောင်းခံထားရတဲ့ကိစ္စ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်နိုင်သလဲ။ <br /> 100 comments on “အလုပ်၊ရာထူး”	Ni Ni Win on August 23, 2010 at 10:56 pm said:
I am looking for jobs and have applied4positions. I want to know whether I can get one of those positions or can find jobs within this year.
saw nyunt san on August 24, 2010 at 2:59 pm said:
အလုတ်နှင့် ပတ်သတ်လို့ဆုတွေ၊ အလုတ်သင်လွှတ်တာတို့မရှိဘူးလား?
Lwann Nay Thu on August 24, 2010 at 3:54 pm said:
Can I getanew contract?
eieikhin on August 24, 2010 at 6:12 pm said:
Ni Ni Win on August 24, 2010 at 7:11 pm said:
Qualityman on August 24, 2010 at 11:08 pm said:
nann myat thiri khing on August 26, 2010 at 5:58 pm said:
nann myat thiri khing on August 26, 2010 at 6:08 pm said:
nann myat thiri khing on August 26, 2010 at 6:10 pm said:
laminphyu.94 on August 31, 2010 at 2:34 pm said:
moek on August 31, 2010 at 7:01 pm said:
THUTA WIN on September 1, 2010 at 6:29 am said:
Now i got the new job,if i go to the new job,could i have good luck or not?
Ma Aye Yu Htwe on September 8, 2010 at 10:35 am said:
khin thu zar on September 11, 2010 at 2:26 pm said:
Khaing on September 16, 2010 at 2:23 pm said:
Please kindly answer me regarding about for looking new job. Can I get better job within short period. Thank you very much Sayar. Please don’t kindly give meafavor not to show my name and question in your site Sayar. Thanks again.
soemoek on September 16, 2010 at 5:41 pm said:
ဖြိုး on September 20, 2010 at 2:16 pm said:
စောညွန့် စံ on September 22, 2010 at 12:52 pm said:
အလုတ်မှာ ဆရာကောင်း သမားကောင်းနဲ့တွေ့ ရမှာလား ?
မေးခွန်း ဘယ်မှာ ရှာရမှာလဲ ဟင်
WG on September 22, 2010 at 2:20 pm said:
စိတ်ဓာတ်တွေ တွင်းဆုံးအထိကျနေချိန်မှာ အားဆေးစားလိုက်ရသလိုပါပဲ။ ကျေးဇူးအထူးပါဆရာ။
youkphalay on September 22, 2010 at 5:02 pm said:
ဗျာ ကျွန်တော် ကလျှောက်တောင်မလျှောက်ရသေးဘူးဗျာ အဲဒီလိုကြီးဟောလိုက်တော. ငိုချင်တာပေါ. အဟင်.အဟင်.
khin khine nwe soe on October 1, 2010 at 3:47 pm said:
သိချင်လို့ ရိုးသားစွာမေးတာပါရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ 2011 ခုနှစ်ထဲမှာ နယ်ပြောင်းရနိုင်လား။ ပြောင်းရင်လဲ လစာကောင်းမလား။ ကျွန်မအတွက်တက်လမ်းရှိမလား ဆိုတာသိချင်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မကို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မအနေနဲ့ request လုပ်တဲ့အနေနဲ့မေးမြန်းတာပါ။
win myat thein on October 5, 2010 at 5:49 pm said:
ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ် ဗျာ။ တတ်နိုင်သလိုကူညီပေးပါဦးဆရာ။
ထိပ်ထား on October 7, 2010 at 3:48 pm said:
Kindly please tell me about for my job luck
နေမျိုးအောင် on October 20, 2010 at 2:44 pm said:
ရွှေစင်အောင် on October 22, 2010 at 2:06 pm said:
Myat Su Hlaing on November 12, 2010 at 1:11 pm said:
I would like to know about job of my life. I am now working foracompany.Though it is notavery well-paid job, it is not so bad for me. Saya, what I want to know is whether there isatotally change about job in my life or not.I was born on 10 June 1986. Really, I want to getastable and professional job.I would like to know when I will haveachance suchajob.I want you to reply to my email.Thankingalot,
Myat Su Hlaing
yu on November 20, 2010 at 2:10 pm said:
pwint on November 26, 2010 at 5:02 pm said:
မင်္ဂလာပါဆရာ..သမီး2.3.1989 ကြာသပတေးသမီးပါ..အခုလက်ရှိအလုပ်ထွက်ပြီအိမ်ပြန်ရင်ကောင်းမလား..အခုဘဏ်မှာလျှောက်ထားတဲ့ အလုပ်ရနိုင်မလားသိချင်ပါတယ်ဆရာ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
aye thein on January 23, 2011 at 12:38 pm said:
ကျွန်တော်ချစ်တဲံ့ သူကို လက်ထက်ရမလား
aye thein on January 23, 2011 at 12:43 pm said:
ကျွန်တော် ၃.၄.၁၉၈၃ ။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူက ၁၂.၂.၁၉၉၂ ပါ၊ကျွန်တော်ချစ်တဲံ့ သူကို လက်ထက်ရမလာ
THANDAR HTUN on February 28, 2011 at 4:53 pm said:
I haveaplan to move new job. Which is increased salary ,more flexible hours 5days/week and good opportunity to improve future career. Currently i am trying and submiting my cv to employer.
Would like to know sir, can i getanew job soon. Huyar no is 36.
ကိုလှိုင်ဝင်းထွန်း on March 5, 2011 at 3:38 pm said:
လေးစားအပ်ပါသော ဆရာခင်ဗျာ ..
ဆရာနဲ့လူချင်းမတွေ့ရပေမဲ့ ဆရာကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အရာတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိခွင့်၊ လေ့လာခွင့်ရလာပါတယ် အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
honeyspear on May 28, 2011 at 9:50 am said:
ဖြူ on May 29, 2011 at 4:18 pm said:
လျောက်ထားတဲ့ အလုပ်က သေချာပေါက်ရနိုင်မလား ။ ဘယ်တော့လောက် အလုပ်စ၀င်ရမလဲ ။ အဲဒီအလုပ်မှာ မြဲနိုင်မှာလား ။
အောင်ထက်ကိုကို on June 7, 2011 at 2:14 pm said:
ဆရာခင်ဗျား မဟာကာလကြီးအတွက်နှင့်အဟောကို သင်ကြားချင်ပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပီးအကြောင်းပြန်ပေးပါခင်ဗျာ ဆရာ့ရဲ.ပညာကိုတတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
khinhtaywin on June 22, 2011 at 2:04 pm said:
Than Tun Aung on July 10, 2011 at 2:34 pm said:
Present company and will be best for this year and next year?
pyae phyo thu on July 21, 2011 at 7:44 pm said:
သမီးအနေနဲ့အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းမကောင်းသိချင်လို့ပါ။သမီးမွေးနေ့က 14.9.1989 ကြာသပတေးနေ့ပါ။ သမီးကိုငယ်ငယ်ကတည်းကဗေဒင်မေးတိုင်း အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းဘူးကြည့်ပြောနေကြလို့ပါ။ တကယ်လို့အိမ်ထောင်ေ၇းကံမကောင်းဘူးဆိုရင်လဲဘယ်လိုချေဖျက်ရမလဲသိချင်ပါတယ်ရှင်။ သမီးရဲ့ဟူးရားဂဏန်းက (၄၂) ပါ။
Dr.Tin Bo Bo on July 21, 2011 at 11:19 pm said:
အိမ်ထောင်ရေး ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် အကောင်းဆုံးက အိမ်ထောင်မပြုဘဲ နေလိုက်ပေါ့ကွယ်။
moelay on August 26, 2011 at 2:57 pm said:
အလုပ်လျှောက်ထားတာ အင်တာဗျူးပီးသွားပီ ရမှာလား မရဘူးလား သိချင်ပါတယ်ရှင့် သမီးမွေးနေ့က 2.8.1990 ပါကြာသာပတေးသမီးပါ ကျေးဇူးပြုပီး တွက်ပေးပါ ဆရာ
သီဟထက်အောက် on September 17, 2011 at 3:17 pm said:
ကျွန်တော် သင်္ဘောသားဖြစ်နိုင်မလား။ သင်္ဘောသားဖြစ်ခဲ့ရင်ရော အောင်မြင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်မလား။
သိချင်တယ်။ အခုအလုပ်မှာလဲ ဘယ်လောက်အထိ ဆက်လုပ်ခွင့်ရမလဲ သိချင်တယ်။ ယခုအလုပ်က Forever Sports Journalr မှာပါ
တာဝန်က စိစစ်ရေးတာဝန်ခံပါ။ နောက်တော့ သူဌေးနဲ့ ကအစဉ်မပြေဘူး
သူနာမည်က – ဦးမြတ်ထွန်း
ကျွန်တော်က – သီဟထက်အောင်
ဆန်းဝေဠုဝင်း on September 29, 2011 at 4:32 pm said:
နာမည်-ဆန်းဝေဠုဝင်း။ မွေးနေ့ ၁၂ရက်၃လ ၁၉၈၅
စင်ကာပူမှာ စာရင်းကိုင်ရာထူးဖြင့်အလုပ်ရှာနေပါသည်။ ၁၀လပိုင်း ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင်ရ မရသိချင်ပါသည် ခင်ဗျ။
thin on October 6, 2011 at 6:54 pm said:
ဆောင်းနှင်းသန်း on October 18, 2011 at 11:37 am said:
wintthu on October 25, 2011 at 3:57 pm said:
သမီးအလုပ်လုပ်လာတာ (၁၀)နှစ်အတွင်းမှာ ပြောင်းခဲ့တဲ့အလုပ်တွေက ၅ ခုလောက်ရှိနေပါပြီ။ သတိထားမိတာကတော့ အလုပ်တစ်ခုကို (၂)နှစ်စီလုပ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အလုပ်ဝင်ပြီး (၂)နှစ်နီးပါးလောက်ဆိုရင် ပြောင်းဖို့အကြောင်းတွေပေါ်လာပြီး ပြောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အခု ဒီအလုပ်ကိုဝင်တာ မကြာသေးပါဘူး။ နောက်ထပ်အလုပ်မပြောင်းရဘဲနဲ့ ဒီအလုပ်မှာပဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ နှစ်အများကြီး လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ကလည်း လုပ်သက်ရရင်ရသလို၊ ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလို၊ ရာထူးတွေတက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်မို့လို့ပါ။ (၂)နှစ်လောက်ဆို အလုပ်ပြောင်းရမလားဆိုပြီး စိတ်ပူနေရလို့ပါ။ ဒီအလုပ်မှာမြဲနိုင်မလား၊ ၀န်ထမ်းအလုပ်မမြဲရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဘယ်တော့လုပ်နိုင်မလဲသိချင်လို့ပါဆရာ။
မွေးနေ့ကတော့ (22.8.1984) ဗုဒ္ဓဟူးသမီးပါ။ ဟူးရားဂဏန်းက 53 ပါဆရာ။
wintthu on October 25, 2011 at 4:20 pm said:
မွေးနေ့ကတော့ (22.8.1984) ဗုဒ္ဓဟူးသမီးပါ။ ဟူးရားဂဏန်းက 53 ပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
myo than htike on October 25, 2011 at 8:46 pm said:
ဒီနှစ်ထဲမှာ အလုပ် ကရာထူးတက်ကိန်းရှိလား သိချင်လို့ပါ
nini on November 28, 2011 at 5:19 pm said:
အလုပ်လျှောက်ထားတာ ရမရသိချင်လို့ပါဆရာ ၊ နောက်ပြီး အလုပ်အသစ်ပြောင်းရင် ကောင်းမကောင်းလေး သိချင်လို့ပါ။ မေးခွန်းရှာမတွေ့လို့ မေးခွန်းbox ထဲမှာ ဖြည့်ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲနော် အဆင်သင့်မေးလို့ရတာပေါ့ ၊ဆရာ အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်ကျရင် အဲဒါလေးဖြည့်ပေးပါနော်
Phyu Phyu on December 14, 2011 at 2:21 am said:
I would like to know about my job. I have been working with this company since 2008. I really don’t satisfied with my position and tried to get better position within the company as well as other companies. I have applied another position with other department last month. Do I haveachance to get that one? Or can I get promotion with my current department? My birthday is 09/16/1977 friday at 10:30 pm. Could you please reply me as your earliest convenience, Saya?
သဲသဲအိ on December 14, 2011 at 9:06 pm said:
အဲဒါနဲ့ ပဲအလုပ်ကလည်းပျက်သွားတယ်၊အလုပ်အသစ်ကိုလည်းဒီမှာပြန်ရှာလို့ ရနိုင်ပမလား
Yain Yain on December 19, 2011 at 9:34 am said:
su on December 21, 2011 at 4:01 pm said:
ဟိ… ၂နှစ်လောက် ကြာတယ်ဆိုတာ တော်သေးတာပေါ့။ အိုင်ဆို ၆လ လောက်ပဲ ကြာတယ်။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုမှ ၂နှစ်လောက်ကြာအောင်လုပ်တာ။
tharngelay.tgu on December 31, 2011 at 7:14 pm said:
အောင်စိုးမင်း on January 4, 2012 at 12:08 am said:
thanthansoe on January 5, 2012 at 9:56 am said:
ဘယ်လိုရာထူး၊ လစာဘယ်လောက် ရမှာလဲ ဆိုတာပါ ထဲ့ပြောပေးပါဆရာ
မွေးနေ့ – 24.1.1964 (သောကြာ)
Ma Zar Chi on January 5, 2012 at 2:43 pm said:
wintthu on January 11, 2012 at 1:15 pm said:
အလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပြောင်းရတဲ့ဒုက္ခကလည်းမသေးဘူးလေ သူငယ်ချင်း..
သဒ္ဒါ on April 30, 2012 at 9:20 pm said:
ဆရာ ကျန်းမာပါစေဆရာ သမီးဒီနှစ်ထဲမှာအစိုးရ၀န်ထမ်းဖြစ်ကိန်းရှိလားသိချင်ပါတယ်ဆရာ
အမည် – သဒ္ဒါ
မွေးရက် – ၂၅.၁၀.၁၉၉၁
မွေးနေ့ – သောကြာ
ဟုးရားဂဏန်းက – ၇၁ ပါဆရာ
NMH on May 3, 2012 at 5:03 pm said:
အခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ ကံမကောင်းမှုတွေနဲ့ အလုပ်ကနေနားရမှာလား။ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရမှာလဲ။
မွေးနေ့ (5.12.1987) (စနေ) ဟူးရား (41)
Thazin Pwint on May 12, 2012 at 12:33 pm said:
မွေးနေ့ (22.11.1974)သောကြာသမီး မနက် 5နာရီခွဲမွေးတာပါ
ဘ၀မှာချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀နဲ့ အဆုံးသတ်မလားသိချင်ပါတယ်။
ni ni win on June 13, 2012 at 10:26 am said:
ထီပေါက်ကိန်းရှိလား…….လက်ရှိ NGO မှာ internal auditor ပါ အလုပ်ရာထူးကော အဆင်ပြေပါ့မလား
ံလှသီတာ on June 18, 2012 at 3:22 pm said:
ဒီနှစ်အလုပ်ပြောင်းရကိန်းရှိလား၊ ရာထူးတိုးဖို့ ရှိလား၊ အလုပ်နေရာတည်မြဲမှာလား၊ အချစ်ရေးကောင်းလား၊ အချစ်ရေးမှာအနှောက်အယှက်ရှိလား၊ အိမ်ထောင်ကျမှာလား၊ ကောင်း၊ မကောင်းသိချင်ပါတယ်၊
မွေးနေ့– ၂၇.၃.၁၉၆၈ (ဗုဒ္ဓဟူးသမီးပါ)
Kyaw Oo on June 22, 2012 at 3:07 am said:
Birth date: 1st Aug 1966 Monday
Q: Any promotion in 2012
soesoemyat on December 12, 2012 at 12:56 pm said:
soesoemyat on December 12, 2012 at 1:10 pm said:
soesoemyat on December 12, 2012 at 3:03 pm said:
အိအိဖြိုး on December 14, 2012 at 11:37 am said:
ဆရာရှင့်….သမီးနာမည်က အိအိဖြိုးပါ ဆရာ။ မွေးနေ့က (29.5.1988 ) တနင်္ဂနွေနေ့ ပါဆရာ။ လာမည့်နှစ် 2013 မှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ် ဆရာ။ အဆင်ရောပြေပါ့မလား ဆရာ။ ဘယ်အလုပ်နှင့် အကျိုးပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကို သိချင်ပါတယ် ဆရာ။
ဟူးရာဂဏန်း – 54
အေးအေးစန်း on December 14, 2012 at 11:42 am said:
ဆရာရှင့်… သမီးနာမည်က အေးအေးစန်းပါ ဆရာ။ မွေးနေ့က (8.1.1989) တနင်္ဂနွေနေ့ ပါဆရာ။ လာမည့်နှစ် 2013 မှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး၊ ကိုယ်ပိုင်အိုးအိမ် နှင့် နေရပါ့မလား ဆရာ။ သိချင်ပါတယ် ။ ဟူးရာ – 63
Dr.Tin Bo Bo on December 14, 2012 at 2:47 pm said:
အခု ကြံရွယ်(စိတ်ကူး)ထားတဲ့ လုပ်ငန်းကတော့ အထမြောက် အောင်မြင်ဖွယ် မရှိဘူး။ ဒါပေ ၂၀၁၃ မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာလည်း လုပ်ငန်းသစ် ဘ၀သစ်တစ်ခု စဖို့ ရှိလို့ အခြားအလုပ်တစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ များသောအားဖြင့် လူမှုဆက်ဆံရေး ၊ လူထုဆက်သွယ်ရေး ၊ ၀န်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးနိုင်တယ်။ လုပ်ငန်းကို အမည်တပ်ပြီး တိတိကျကျ မေးရင် ပိုကောင်းတယ်။
ayeayesan on December 16, 2012 at 10:59 am said:
ဆရာရှင့်.. သမီးနာမည်က အေးအေးစန်းဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့က (8.1.1989) တနင်္ဂနွေနေ့ပါဆရာ။ ဟူးရာဂဏန်းကတော့ 15 ဖြစ်ပါတယ်။ လာမည့်နှစ် 2013 မှာ ကိုယ်ပိုင်အိုးအိမ် နှင့် နေရပါ့မလား ဆရာ။ သိချင်ပါတယ်။
eieiphyo on December 16, 2012 at 11:04 am said:
ဆရာ.. ဟိုတစ်ပတ်က မေးထားပါတယ် ဆရာ။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ချင်တာက ခရီးသွားကားလက်မှတ်ရောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဆရာ။ အကျိုးပေး၊ အဆင်ပြေပါ့မလား ဆရာ။ မွေးနေ့က (29.5.1988) တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဟူးရားဂဏန်းက 94 ပါဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ထပ် ဖြေကြားပေးပါ ဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။လာမည့်နှစ် 2013 အတွက်ပါ။
Dr.Tin Bo Bo on December 16, 2012 at 9:33 pm said:
လာမည် ၂၀၁၃ အတွင်းမှာတော့ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေလေး နည်းနည်း တိုးတက်ကောင်း တိုးတက်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အိုးအိမ်နဲ့ နေရဖို့တော့ မမြင်သေးပါ။ အချိန်နည်းနည်း လိုပါသေးတယ်။
Dr.Tin Bo Bo on December 16, 2012 at 9:37 pm said:
အဲဒီ လုပ်ငန်းလေးကတော့ မဆိုးပါဘူး။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။ (၂)နှစ်လောက်ရှိရင် စိတ်ပြောင်းသွားတတ်တယ်။
eaindramyonyunt on December 17, 2012 at 10:18 am said:
ဆရာ..သမီးနာမည်ကအိန္ဒြာမျိုးညွန့်ပါ..မွေးနေ့က11.6.1989ပါ..သမီးနဲ့စာ၇င်းကိုင်အလုပ်နဲ့အကျိုးပေးမပေးသိချင်ပါတယ်..သမီးစာရင်းကိုင်နဲ့အလုပ်လျှောက်တာလဲမရသေးဘူး..သမီးဘယ်တော့လောက်မှအဲ့အလုပ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရမလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ…သမီးဟူးရာဂဏန်းက 33 ပါဆရာ..
Dr.Tin Bo Bo on December 18, 2012 at 8:20 am said:
စာရင်းကို အလုပ်နဲ့ သိပ်မကျိုးမပေးလှပါ။ အလုပ်ရှာရခက်ခဲခြင်း ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရန်သူများခြင်း ၊ အတိုက်အခိုက်များခြင်း ၊ အလုပ်မကြာခဏ အပြောင်းအလဲ လုပ်ရခြင်း များနှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိပါတယ်။
မေသက်ဇင် on January 6, 2013 at 10:04 am said:
ဆရာ သမီးဒီနှစ်ထဲမှာ စာရင်းကိုင်အနေနဲ့ အလုပ်ပြောင်းချင်လို့ ပြောင်းရင်အဆင်ပြေပါ့မလားကြည့်ပေးပါဆရာ
အိန္ဒြာမျိုးညွှန့် on January 6, 2013 at 10:22 am said:
11.6.1989 ၊ တနင်္ဂနွေသမီး
ဆရာ သမီးအခု CB ဘဏ် မှာအလုပ်လျှောက်ထားတယ် ရနိုင်မလားကြည့်ပေးပါဆရာ
နှင်းကလျာစိုး on January 6, 2013 at 10:26 am said:
20.8.1994 ၊ စနေသမီး
nyein chan aung on January 31, 2013 at 2:34 pm said:
ဆရာ မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် က facebook မှာ ဗေဒင်ဆိုတယ်. page လေးတစ်ခု လုပ်ထားပါတယ် ။ကျွန်တော် က ဗေဒင် မတွက်တက်ပါဘူး ။facebookမှာရှိတယ်. တခြားသူတွေအလွယ်တကူ ဖတ်လို.ရအောင် ဆရာတို.တင်ထားတာတွေကိုသာ ကူးယူဖော်ပြနေတာပါ ။ အဲ.တွက် ဆရာ အနေနဲ. ခွင်.လွှတ်ပေးပါလို.တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် က ၂၃.၄.၁၉၉၁ မွေးပါတယ်။ ကျွန်တော် မှာ အိမ်ထောင်နှစ်ဆက် ရှိမရှိသိချင်ပါတယ်။ အဖေအမေတွေက အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်ကျခဲ.လို.ပါ ။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေပြောပြပေးပါ ။ အင်္ဂါနေ. မနက် ၉း၁၅ မွေးပါတယ် ။နာမည်က ငြိမ်းချမ်းအောင်ပါ။
zaw min oo on February 2, 2013 at 2:46 pm said:
ကျွန်တော့အမည်ဇော်မင်းဦးပါ 1969 စက်တင်ဘာလ 20 ရက်မှာမွေးပါတယ် ဟူးရာဂဏန်းတော့မသိပါဘူးဆရာ ကြိုက်တာကတော့7ပါ အခုလက်ရှိအလုပ်မှာ လုပ်နေတုံး အခြားအလုပ်တစ်ခုက ကျွန်တော့ကိုကမ်းလှမ်းလာလို. ပြောင်းသင့် မပြောင်းသင့် သိပါရစေဆရာ
may thet zin on February 4, 2013 at 12:33 pm said:
Dr.Tin Bo Bo on February 5, 2013 at 9:20 am said:
ဒီနှစ်ထဲ အလုပ်ပြောင်းချင် ရတယ်။ ပြောင်းကိန်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ရောက်တဲ့နေရာမှာ ပင်ပန်းမယ်။ တာဝန်ကြီးမယ်။ ရန် အတိုက်အခိုက်များမယ်။ ဒါပေမယ့် အပင်ပန်းခံပြီး တာဝန်သိစိတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရင်း တဖြည်းဖြည်း ရာထူးတက်သွားလိမ့်မယ်။
မေသက်ဇင် on February 5, 2013 at 10:06 am said:
ဆရာ သမီးအလုပ်ပြောင်းရင်ဘယ်လို အလုပ်နဲ့ပို အဆင်ပြေနိုင်မလဲ အခု ခရီးသွားလုပ်ငန်း တခုမှာပြောထားလို့ပါဆရာ၊ ဘယ်လိုအလုပ်နဲ့ပိုအဆင်ပြေနိုင်မလဲကြည့်ပေးပါဆရာ
Dr.Tin Bo Bo on February 7, 2013 at 8:45 am said:
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရေရှည်အကျိုးမပြုပါ။ ခေတ္တသာ လုပ်ရပြီး ပြန်ပြောင်းရမယ်။ စာရင်းအင်း ၊ ဘဏ် ၊ ပညာသင်ကြားရေး ၊ သတင်း ဆက်သွယ်ရေး ၊ ဆေးဝါးလုပ်ငန်းများ နှင့် ဆက်စပ်နေသော လုပ်ငန်းများမှာ ရေရှည်အကျိုးပြုပါမယ်။
နှင်းကလျာစိုး on February 7, 2013 at 10:09 am said:
နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ချင် သွားရကိန်းရှိ်လားကြည့်ပေးပါဆရာ
su hlaing on February 16, 2013 at 5:51 pm said:
သဇင်လေးမောင် on February 17, 2013 at 4:23 pm said:
ဆရာ သမီးဒီနှစ်ထဲမှာ အလုပ်ပြောင်းချင်လို့ ပြောင်းရင်အဆင်ပြေမပြေကြည့်ပေးပါ
ကိုလင်း 18 on March 9, 2013 at 1:00 am said:
ကျေးဇူး တင်ကြောင်းပါဆရာ…..ကျနော် အနောက်ဖက်နိုင်ငံတခုကို အလုပ်သွားသင်ကြားပေးနေတာ ၁၁လရှိပါပြီ..ပြန်လို့လဲရနေပါပြီ…လခကောင်းနေတော့ နောက်ထပ်ဆက်နေချင်ပါသေးတယ်…အခုခလုတ်နှိပ်လိုက်တော့ တွန်းမချနိုင်ပါကြောင်းပေါ်လာပါတယ်..ဆက်နေလို့ရမရ သိပါရစေခင်ဗျာ ..စနေသား …18.12.65….ဟူးရား =15 ဖြစ်ပါတယ်…လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်တုံးက အလုပ်အရမ်းခက် ကံကျနေချိန် ဆရာ ကို မေးဘူးပြီး တရားများများ ဖက်ခိုင်းတာ လုပ်မိလို့ တသက်တာ အတွင်းမှာ အကောင်းဆုံး အလုပ်ကိုရခဲ့ပါတယ်…(ဆက်နေလို့ရမရ သိပါရစေခင်ဗျာ)…လေးစားလျက် ကိုလင်း
Myat Hnin Khine on March 9, 2013 at 10:45 am said:
ဆရာ သမီးမွေးသက္ကရာဇ်က 24/12/1978(Sun ) ပါ။အလုပ်ကCivil Engineer ပါ။ အခုလုပ်နေတဲ့project က ပြီးခါနီးဖြစ်နေပါပြီ။ အလုပ်နောက်တစ်ခုပြောင်းရမဲ့အချိန်က အင်္ဂါသက္က ထဲရောက်နေတော့ ဘာလုပ်သင့်လဲ ဆိုတာဖြေပေးပါ ဆရာ။ ဟူးရားဂဏန်းက 27 ပါ။
Dr.Tin Bo Bo on March 10, 2013 at 4:50 pm said:
ဆက်နေလို့လည်း ရတယ်။ နေလည်း နေသင့်တယ်။ အခုရောက်နေတဲ့ သက္ခတ်က အသက်(၄၈)နှစ် ဗုဒ္ဓဟူးသက္ခတ်ဖြစ်လေတော့ ဒီအချိန်မှာ အလုပ်ထွက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ပြန်လာရင် ဒီမှာ “ရွာလည်” မယ့် ကိန်းဆိုက်မယ်။ သက္ခတ် ဗုဒ္ဓဟူးထဲမှာ အပြောင်းအလဲ မလုပ်သင့်ဘူး။ အလုပ်မကောင်းဘူး ဆိုရင်တောင်မှ အောင့်အည်းနေရမှာ။ အလုပ်ကောင်းတယ်ဆိုရင် ဆက်နေဖို့ ကြိုးစားပါ။ နေခွင့်ဆက်လျှောက်ပါ။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
မေသက်ဇင် on March 14, 2013 at 9:27 am said:
ဆရာ သမီး CB ဘဏ်ခွဲမှာအလုပ်လျှောက်ထားတယ် ရနိုင်ပါ့မလားကြည့်ပေးပါ ဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေသက်ဇင် on March 20, 2013 at 10:12 am said:
မေသက်ဇင် on April 7, 2013 at 6:49 pm said:
ဆရာ သမီး CB ဘဏ်ခွဲ မှာ အလုပ်လျှောက်ထားတယ်ပါတယ် ဆရာ ရနိုင်ပါ့မလားကြည့်ပေးပါအုန်းဆရာ
thazin lay maung on April 8, 2013 at 2:15 pm said:
Thazin Lay Maung
Thazin Lay Maung on April 9, 2013 at 6:53 pm said:
Thazin Lay Maug
Thazin OO on April 20, 2013 at 2:29 pm said:
Thazin Oo (6.9.1990)ကြာသပတေးသမီး ဆရာသမီးအခုသင်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ရေရှည်လုပ်စားလို့ရမလား?တကယ်လို့မရခဲ့ရင် ဘာအလုပ်နဲ့အကြိုးပေးလည်းဆိုတာသိချင်ပါတယ်?ပြီးတော့ဒုတိယကလေးကို ဘယ်အချိန်လောက်ယူရင်အဆင်ပြေလောက်လဲ။ပထမ ကလေးက ယောက်ျားလေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
man toung thar on April 20, 2013 at 5:14 pm said:
ကျွန်တော် က၁၉၈၈ ၇ ၂၂ သောကြာပါ ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ အလှည့်အပြောင်းလေးသိခြင်ပါတယ်
man toung thar on April 20, 2013 at 5:20 pm said:
cho cho win on May 10, 2013 at 3:54 pm said:
i have to applyanew job, i want to know pass or no pass. pls can you tell me? i waiting for your reply.
ayeayenyein on May 19, 2013 at 11:45 am said:
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,467)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,956)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,535)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,306)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,386)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,542)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,572)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,934)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,279)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,262)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,086)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,048)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,814)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,754)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,298)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,112)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,831)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,476)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,138)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,824)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,680)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,541)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,477)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,255)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,229)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,892)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,670)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,472)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,012)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !